भूकम्पपीडितको नाममा दुई छोरीलाई चीन घुम्न पठाउने गृहमन्त्रीबाट के आश गर्ने ? - inaruwaonline.com
भूकम्पपीडितको नाममा दुई छोरीलाई चीन घुम्न पठाउने गृहमन्त्रीबाट के आश गर्ने ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २६, २०७२ समय: २:५७:२६
काठमाण्डाै , २५ मंसिर / गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्पपीडितका नाममा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी नातिनीलगायत आफ्ना नातागोता र पार्टी कार्यकर्तालाई चीन भ्रमणमा पठाउँदै छन् । सिचुवान प्रान्तको कुन्मिङ र छेन्दुङ सहरको ७ दिने अवलोकन भ्रमणमा मन्त्री बस्नेतकै छोरीद्वय संगम र ववितासमेत छन् ।
भूकम्पपीडित जिल्लाका १५ देखि ३० वर्षसम्मका युवाका लागि चीन सरकारले व्यवस्था गरेको अवलोकन भ्रमणमा पार्टी अध्यक्ष दाहालकी छोरी–नातिनी स्मिता प्रधान, दृष्टि केसी, सन्ध्या केसी र प्रतिमा पाठक छन् । यस्तै, पार्टी केन्द्रीय सदस्य अञ्जना विसंखेकी छोरी स्वस्तिका र स्वकीय सचिव एवं जाजरकोट पार्टी कार्यकर्ता ललित बुढाकी पत्नी लक्ष्मी गिरी पनि छन् ।
मन्त्री बस्नेतका गाडी चालक किरण बोगटी र मन्त्री पत्नी सत्या पहाडीकी फुपूका छोरा सूर्य गुरुङकी पत्नी पनि चीन सयर गर्दै छन् । स्रोतका अनुसार चीनले भूकम्पीय क्षेत्र कुन्मिङ र छेन्दुङको अवलोकनका लागि निम्तो पठाएको थियो । १४ जिल्लाबाट ४ जनाका दरले छनोट गरिए पनि बाँकी कोटामा पार्टी नेता तथा गृहका कर्मचारीका आफन्त छानिएको छ । टोली शुक्रबार चीन जाने र पुस २ मा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
मन्त्रीको सचिवालयमा पासपोर्ट लिन आएकी धनगढीकी जयन्ती जोशी चीन घुम्न जान पाएकोमा निकै खुसी देखिइन् । भूकम्पपीडितको नाममा आएको कोटामा जान लागेको बारेचाहिँ आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताइन् । अखिल क्रान्तिकारीका सीटीईभीटी एकाइ कमिटी अध्यक्ष सुरजसिंह ठकुरी पनि टोलीमा परेका छन्। उनी चितवन निवासी हुन्। सचिवालयका शाखा अधिकृतद्वय धर्मराज न्यौपानेकी छोरी सवनम र चित्रजंग शाहीका छोरा अनमोल पनि परेका छन् । अाजकाे कान्तिपूर दैनिकमा खबर छ ।